आज यी कम्पनीको शे यर मुल्यमा उच्च वृद्धि, कुनको कति प्रतिशतले बढ्यो त ? हेर्नुहोस् – Ap Nepal
आज यी कम्पनीको शे यर मुल्यमा उच्च वृद्धि, कुनको कति प्रतिशतले बढ्यो त ? हेर्नुहोस्
कारोबारको तेस्रो दिन –बुधबार) नेपाल स्टक एक्सेन्च (नेप्से)मा ५ कम्पनीेको शेयरमुल्य उच्च वृद्धि भएको छ । शेयरमुल्य बढ्नेमा तीन इन्स्योरेन्स कम्पनी, एक लघुवित्त र एक माइक्रोफाइनान्स रहेको छ । आज महिला लघुवित्तको ९.९७, अजोड इन्स्योरेन्सको ९.९६, वामी माइक्रोफाइनान्सको ९.९६,सानीमा जनरल इन्स्योरेन्सको ९.९२ र प्रडेन्सियल इन्स्योरेन्सको ९.०८ प्रतिशतले शेयरमुल्य बढेको हो ।
१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ निष्काशन गर्दै मध्य भोटेकोशी जलविद्युत
मध्य भोटेकोशी जलविधुत कम्पनीले आइपीओ निष्काशन गर्न लागेको छ । कम्पनीले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५० लाख कित्ता आइपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो । शेयर जारी गर्न २०७६ माघ १० गते निवेदन दर्ता गराएको कम्पनीको आईपीओ स्वीकृत हुने अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
सो जलविधुत कम्पनिको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीले यसअघि सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता, ऋण प्रदायक कम्पनीका कर्मचारी र संस्थापक शेयर धारण गर्ने कम्पनीका कर्मचारीका लागि एक अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको एक करोड ४४ लाख कित्ता शेयर बिक्री गरिसकेको छ ।
मध्य भोटेकोशीको सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा १०२ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छ । व्याजसहित १५ अर्ब रूपैयाँ लागतमा बन्ने आयोजना सन् २०१३ को सुरुवातमा निर्माण सुरु गरी सन् २०१६ को अन्त्यमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर जुरे पहिरो, भूकम्प, बाढीपहिरो, बाँधस्थलको जग्गा समयमा उपलब्ध नभएका कारण आयोजनाको म्याद थप गरिएको थियो ।
संशोधित कार्यतालिकाअनुसार आयोजनाको निर्माण सन् २०१९ को जुनमा सक्ने लक्ष्य राखिएपनि अझै सकिएको छैन। आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले ६ अर्ब २१ करोड ऋण लगानी गरेको छ । आयोजनामा चिलिमेको ३८, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १० तथा स्थानीय नेपाल अरनिको हाइड्रो कम्पनी, सिन्धु इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रालि र सिन्धुपाल्चोक हाइड्रो पावर कम्पनीको एकरएक प्रतिशत संस्थापक सेयर रहने छ । सर्वसाधरणलाई १५, प्रभावित जिल्लाबासीलाई १०, कर्मचारी सञ्चय कोषलाई १९.५ र आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीलाई ३.५ प्रतिशत शेयर दिइनेछ ।
Prevह्वात्तै बढ्यो हवाई भाडा.. काठमाण्डौ-दिल्ली एकतर्फीकै ४८ हजार
Next‘फुलबुट्टे सारी’ गाउने अफ्रिकन गायिका मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा , बिहे गर्छु भने पछी आत्ति, ए मुन्द्रे….(हेर्नुहोस रमाइलो भिडियो)
“हल्का रमाइलो” को तिहार विशेष ५३ औं हेर्नुहोस (भिडियो) भाग यस्तो छ ! हेर्नुहोस् भिडियो